Nepal Dayari | मलेसियाको कारागार बाट श्रीमान बारे आयो यस्तो खबर यसरी श्रीमती रुदै के भयो (भिडियो सहित)
मलेसियाको कारागार बाट श्रीमान बारे आयो यस्तो खबर यसरी श्रीमती रुदै के भयो (भिडियो सहित)
साउन २२, २०७८ शुक्रबार ११०४ पटक हेरिएको
मलेसियाको कारागार बाट श्रीमान बारे आयो यस्तो खबर यसरी श्रीमती रुदै के भयो, भिडियो सहित
लगभक ७ बर्ष देखि मलेशियाको जे’लमा जे’ल जी’वन बिताइरहेका हेटौडाका मोदनाथ तिमल्सिना , मलेसियाकै जे’ल बाट अहिले मिडियाको सम्पर्कमा आएका छन् । मोदनाथ तिमल्सिनालाई अहिले नेपाली पा’त्र अनुसार कति चलिरहेको छ र आफू कहिले जे’ल च’ला’न भएको थिए भन्नेसम्म पनि स्मरण छैन्। नेपालमा भु’कम्प गएको १२/१५ दिनपछि आफू जे’ल गएको भन्ने उनलाई याद छ । उनको पैसा लुट्न आएका लुटेराहरुसग दोहोरो भि डन्त पर्दा एक लुटेराको मृ’त्यु भैसके प’श्चात् मलेशियाको प्र’हरिले उनलाई नि’यन्त्र’णमा
लिइएको हो भन्ने सा’मान्य जानकारी प्रा’प्त भएको छ । मोदनाथ मात्रै एक हैनन् जस्ले यसरी जे’ल जी’वन बिताइरहेका छन् । उनी बस्दै आएको जे’लमा थु’प्रै नेपालिहरु भएको समेत उनले बताएका छन् ।मिडियामा आएपछि आफ्नो परिवारलाई जानकारी हुने र सम्बन्धित ठाउ बाट पह’ल भए आफू नेपाल फर्किन पाउने आ’शा सहित उनी ल’गा’यत थुप्रै नेपालिको मनो’कामना छ ।
अहिले मोदनाथको घरमै हामी पुगेका छौ । उनले दिएको ठेगा’ना अनुसार हेटौडा नजिकै बा’गदलि भन्ने ठाउमा उनको परिवार रहदै आ’एको छ । उक्त परिवारले मोदनाथ लाई मायानै मा’रिस’केको रहेछन तर अन्तत’ उनको जि’बि’तको खबरले यो परिवारमा फेरि खुसि ल्या’एको छ ।यतिका वर्ष ७ सम्म के गरेर बस्नुभयो हजुर ? ब’च्चा हरुको मेरो याद आएन ? ७ वर्ष पछि आफ्ना श्रीमानको अ’नुहार भिडियोकलमा देख्न पाएकी महिलाले श्रीमानलाई गरेको पहिलो प्रश्न थियो । श्रीमतीको यस्तो प्रश्न सुनेर उनका श्रीमानले आँखा बाट आँ’शु झारेका थिय । श्रीमानको आँखामा आँशु देखेर श्रीमती पनि भा’वुक भइन् । उनले श्रीमानलाई न’रुनु भनेर स’म्झाइन् । आफुले सोँ’चेको सपना मैले पुरा गर्न स’किन । त्यसमा मलाई क्ष’मा देउ म त्यो भन्दा केही बो’ल्न पनि स’क्दिन । श्रीमानले त्यसो भनेर भ’क्कानिएपछि उनको श्रीमतीले पनि मन थाम्न सकिनन् ।
उनी पनि श्रीमानसंगै रोइन् । श्रीमानले भने म जिउँदै छु अब तिमीले केही चिन्ता नगर तर मलाई विगतको कुरा भने याद नदिलाउ । दुई तिन वर्ष अघि म जिवितै फ’र्कन्छु भन्ने जस्तो पनि लागेको थिएन तर अब म बाँ’च्छु जस्तो लागेको छ । अब म फर्कन्छु । म केही सामान लिएर आएको थिएँ तर यहाँ आएर के भयो मलाई नै थाहा छैन । श्रीमती देवकीले भनिन् ऋ’ण भन्ने सबैलाई लाग्छ टे’न्सन न’लिनु भनेर सम्झाइन् श्रीमान मोदनाथलाई । श्रीमानले भने, मलाई सबैको याद आ’उँथ्यो, तर मसंग मोवाइल पनि थिएन, म बाँ’च्छु जस्तो पनि ला’गेको थिएन । सबै झो”ला सबै चो”री भयो मसंग तिमीलाई सम्पर्क गर्ने नम्बर पनि थिएन, अहिले भने उनीहरुका छोरा छोरी पनि ठूला भैसकेका छन् ।